Warar - Hordhac biibiile aan xuduud lahayn
Biibiile bir ah oo aan xuduud lahayn oo kulul oo duuban
Sax sax tuuboyinka
Saxanka birta ah ee Daawaha
Tuubo bir ah oo laba jibbaaran
Dhuumaha birta ah ee laba jibbaaran
Dheriga ubaxa Corten
Shaashadda birta Corten
Xidho saxanka birta u adkaysta
Hordhaca biibiile aan xuduud lahayn
Tuubo laba jibbaaran oo aan xuduud lahayn waa nooc bir ah oo dhaadheer oo leh meel godan oo aan lahayn kalagoys ku wareegsan. Tuubooyinka birta ah ee qaybta godadka leh ayaa si ballaaran loogu isticmaalaa gudbinta dareeraha, sida gudbinta saliidda, gaaska dabiiciga ah, gaaska, biyaha iyo qaar ka mid ah qalabka adag. iyo birta kale ee adag, tuubada birta waa nooc bir bir ah oo qaybta birta dhaqaalaha ah oo leh isla rogrogmo iyo xoog torsional iyo culeys fudud. Waxaa si weyn loogu isticmaalaa soo saarida qeybaha qaabdhismeedka iyo qeybaha farsamada, sida dhuumaha layliga saliida, mashiinka gudbinta gawaarida, mootada mootada iyo iskuxirka birta ee loo isticmaalo dhismaha.U isticmaalka tuubada birta si loo sameeyo qeybaha giraanta ayaa hagaajin kara ka faa'iideysiga qalabka, fududeynta habka wax soo saarka iyo keydinta walxaha iyo waqtiga wax qabadka, sida duudduubka dhalista duudduuban.
Waqtigan xaadirka ah, biibiile bir ah ayaa si ballaaran loo isticmaalay si loo soo saaro giraanta iyo gacmo-gacmeedka. Tuubo bir ah ama noocyo kala duwan oo hubka caadiga ah oo aan lagama maarmaan ahayn, foosto qori, foosto ilaa tuubo bir ah si loo soo saaro. Tuubooyinka birta ah ayaa loo qaybin karaa tuubooyin wareegsan iyo qaab gaar ah Maaddaama wareegga uu leeyahay aagga ugu ballaadhan isla wareeggaas oo kale, dheecaan badan ayaa lagu qaadi karaa tuubo wareeg ah.Intaas waxaa sii dheer, marka qaybta sanadlaha ahi ay qaaddo cadaadis shucaac gudaha ama dibedda ah, xoogga ayaa labis badan, sidaa darteed inta badan tuubooyinka birta waa tuubooyin wareegsan Si kastaba ha noqotee, dhuumaha wareega ayaa sidoo kale leh xaddidaadyo gaar ah, sida xaaladda foorarsiga diyaaradda, tuubada wareegsan uma xoog badna sida laba jibbaaran, tuubada qafiifinta laaban ee leydi, qaab dhismeedka mashiinada beeraha qaarkood, birta iyo alwaaxa, iwm., waxaa badanaa loo isticmaalaa laba jibbaaran, tuubbo qaabaysan.Waxaa loo baahan yahay tuubooyin bir ah oo qaab gaar ah u qaabeysan oo leh qaabab kala duwan oo kala duwan sida ku xusan USES kala duwan.
Marka loo eego habab wax soo saar oo kala duwan ayaa loo qaybin karaa tuubbo rogrogmaysa oo kulul, tuubbo rogo oo qabow, biibiile sawir qabow, tuubada extrusion iyo wixii la mid ah.
1.1. Tuubbooyin aan kala go 'lahayn oo kululeyd ayaa guud ahaan lagu soo saaraa dhalo iskiis-u-roganaya. Billet-ka adag ee tuubada ayaa loo kala jaray qaybo ka dib kormeerkii iyo ciladaha dusha sare laga saaray
Dhererka loo baahan yahay waa inuu udub dhexaad u ahaadaa wajiga dhamaadka dhamaadka daloolka weelkii tuubada, ka dibna loo diraa foornada kululaynta si loogu kululeeyo loona dalooliyo feerka.
Wareeg isdaba joog ah iyo horay, hoos timaada rullaluistemadka iyo madaxa, moolka gudaha ayaa si tartiib tartiib ah u sameeyay dalool, oo loo yaqaan 'tuubbada'.
Ugu dambayntii, dhumucda gidaarka waxaa hagaajiya mashiinka oo dhan dhexroorkuna waxaa go'aamiya mashiinka cabbirka si loo buuxiyo shuruudaha qeexida.
Soo saarida tuubbo bir ah oo aan xuduud lahayn oo kulul oo duuban waa hab horumarsan.
1.2. Si loo helo tuubooyin aan xuduud lahayn oo ka tayo iyo tayo wanaagsan, rogrogmadaanta qabow, sawir qabow ama labada isku dhafan waa in la qaato.
Habka. Is rogista qabowga waxaa badanaa lagu sameeyaa dhagax weyn oo laba-sare ah. Tuubada birta ah waa dalool wareeg ah oo ku yaal jeexdin wareeg ah oo leh madaxa koorta oo go'an iyo qayb isbeddela.
Wareejinta Dhexe Sawirka qabow waxaa badanaa lagu qaadaa 0.5 ~ 100T silsilad hal ah ama laba silsilad oo mashiin sawir ah oo qabow ah.
1.3 Qaabka kala-bixinta, tuubada madhan ee tuubada ah waxaa lagu dhejiyaa dhululubo xirxiran, iyo usha daloollan iyo usha isugeynta ayaa wada socda si loo sameeyo
Soo-saaraha waxaa laga soo saaray god yar oo dhinta.Habkan wuxuu soo saari karaa tuubo bir ah oo dhexroor yar leh.
2. Tijaabada isku-darka kiimikada
2.1 Tubooyinka aan xadka lahayn ee gudaha oo la bixiyay iyadoo loo eegayo halabuurka kiimikada iyo aaladaha farsamada, sida waxyaabaha: 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 Astm a106 Astm a53
Halabuurka kiimikada ee maya. 50 biraha waa inay u hogaansamaan qodobada GB / T699-88. Tuubooyinka dalka laga soo dhoofiyo ee aan xadka lahayn ayaa la baarayaa iyadoo la raacayo heerarka ku habboon ee ku xusan qandaraaska.
Waxyaabaha kiimikada ee birta ka kooban 09MnV, 16Mn iyo 15MnV waa inay waafaqaan qodobbada GB1591-79.
2.2 Tixraac qaybta ku habboon ee GB223-84 Hababka Falanqaynta Kiimikada ee Birta iyo Daawaha hababka falanqaynta gaarka ah.
2.3 Duwanaanta Falanqaynta ee Tixraaca GB222-84 "Leexashada La Oggol yahay ee Dhismaha Kiimikada Muunado iyo Alaabada Dhameystiran ee Falanqaynta Kiimikada ee Birta".
3. Kormeerka waxqabadka jirka
3.1 Tuubbo aan xuduud lahayn oo gudaha ah oo lagu keenay iyadoo loo eegayo waxqabadka farsamada, birta caadiga ah ee kaarboon kaar ah sida waafaqsan GB / T700-88 fasal A soosaarida birta (laakiin waa inay
Hubso in maadada baaruuddu aysan ka badnayn 0.050% iyo fosfooraska aanu ka badnayn 0.045%), aaladaha farsamaysan waa inay u ekaadaan miiska GB8162-87
3.2 Tubooyinka aan xadka lahayn ee gudaha oo la bixiyay iyadoo loo eegayo baaritaanka biyo-baraha waa in la hubiyaa baaritaanka biyo-barafka ee lagu caddeeyay heerka.
3.3 Kormeerka waxqabadka jireed ee tuubbada aan xadka lahayn ee la soo dhoofiyo waa in loo sameeyaa iyadoo loo eegayo heerarka ku habboon ee ku xusan qandaraaska.
2.1. Biibiile aan xuduud lahayn ayaa si ballaaran loo isticmaalaa, ujeedada guud ee biibiile la'aanta ah waxaa laga sameeyaa bir bir ah oo qaab dhismeed qaab dhismeedkiisu hooseeyo
Mashiinka birta ama birta ah ee duudduuban, wax soo saarka ugu weyn, inta badan loo isticmaalo gudbinta dhuumaha dareeraha ama qaybaha qaabdhismeedka.
2.2 Seddex nooc oo sahay ah iyadoo loo eegayo ISTICMAALO kaladuwan: A. Siinta iyadoo loo eegayo halabuurka kiimikada iyo astaamaha farsamada; B. Keen sida waafaqsan waxqabadka farsamada; C,
Waxaa bixiya tijaabada biyaha (hydrostatic test) Tuubooyinka birta ah ee la bixiyo ee ka hooseeya fasallada A iyo B sidoo kale waa in lagu soo rido baaritaanka hayd-biyoodka haddii loo isticmaalayo qaadista cadaadiska dareeraha.
2.3 Tuubooyin aan xuduud lahayn oo ujeeddooyin gaar ah leh waxaa ka mid ah tuubooyin aan wax tol lahayn lahayn, tuubooyin aan cillad lahayn iyo dhuumo shidaal la'aan.
4.1 Marka loo eego habab wax soo saar oo kala duwan, tuubooyin bir ah oo aan xadi lahayn ayaa loo qaybin karaa tuubbo kulul oo la duubay, tuubbo qabow, tuubbo qabow, tuubbo extrusion, iwm.
4.2 Waxaa jira tuubooyin wareegsan iyo tuubooyin qaab-gaar ah leh oo muuqaalkooda ah.Intaa waxaa dheer tuubooyin laba jibbaaran iyo qaab-leeg, tuubbooyin qaab-gaar ah leh ayaa sidoo kale leh tuubooyin elliptical, Semicircular, saddex xagal, laba geesle, qaab isku dhejisan, qaab muuqaal leh, iwm.
4.3 Marka loo eego qalabka kala duwan, waxaa loo qaybin karaa tuubbada qaabdhismeedka kaarboon caadiga ah, tubbada qaabdhismeedka daawaha oo hooseeya, tubbada qaabdhismeedka kaarboon tayo sare leh iyo isgoyska daawaha Dhuumaha dhismaha, tuubo aan lahayn, iwm.
4.4 Marka loo eego ujeedada gaarka ah, waxaa jira tuubooyin kuleyliyaha ah, tuubooyin juquraafi, tuubooyin batrool, iwm.
5. Tilmaamaha iyo tayada muuqaalka
Biibiile aan xuduud lahayn sida ku cad qodobada GB / T8162-87
5.1. Faahfaahinta: Dhexdhexaadiyaha biibiile kulul ee duuban 32 ~ 630mm dhumucda derbiga waa 2.5 ~ 75mm.Coomaha qabow (sawir qabow) dhexroor biibiile 5 ~ 200mm.
Dhumucda gidaarku waa 2.5 ~ 12mm.
5.2 Tayada muuqaalka: dusha iyo dusha sare ee tuubooyinka birta ma lahaan doonaan dildilaac, laablaabasho, duubis, xayeysiis, khadadka timaha ama cilladaha nabarrada.
Cilladahaas waa in gebi ahaanba laga saaraa dhumucda gidaarka iyo dhexroorka dibedda waa inaysan ka badnaan leexashada xun ka dib saarista.
5.3 Labada daraf ee biibiilaha birta waa in loo jaro xaglaha saxda ah waana in laga gooyo burcadka.Gas jarista iyo goynta kuleylka waxaa loo oggol yahay tuubooyin bir ah oo leh dhumucda darbiga ka weyn 20mm
Goyn Waxaa laga yaabaa inaan lagu jarin heshiis u dhexeeya iibsadaha iyo iibiyaha.
4.4 Tayada tuubooyinka birta ah ee bilaa sumad ahaanta ah ee qabow-soo jiiday ama qabow-duudduuban waa inay tixraacaan GB3639-83.
Sida ku xusan GB2102-88.Waxaa jira saddex nooc oo xirxirida dhuumaha birta ah: xirashada, xirxirida, saliida xirashada ama xirxirida saliida. Tuubo bir ah ayaa ah Fiiq dheer oo bir ah oo leh qayb godan oo aan kalagoys lahayn agagaarka. Tuulada birta leh qaybta godka ayaa si ballaaran loogu isticmaalaa gudbinta dareeraha Dhuumaha, sida midka qaada saliida, gaaska dabiiciga ah, gaaska, biyaha, iyo qalabka adag qaarkood. Marka loo barbar dhigo birta wareega iyo birta kale ee adag, Waa nooc bir ah oo iskutallaab-dhaqaale oo isku mid ah oo isku mid ah oo rogrogmi kara iyo xoog torsional iyo miisaan fudud. Waxaa si ballaaran loogu adeegsadaa soo saarista qeybaha dhismaha iyo qeybaha farsamada.
Sida tuubada layliga saliida, mashiinka gawaarida gawaarida lagu xiro, mootada baaskiilka iyo iskuxirka birta ee loo isticmaalo dhismaha. Qaybaha wareega ee ka sameysan tuubooyinka birta, Waxay hagaajin kartaa ka faa'iideysiga maaddada, fududeyneysa habka wax soo saarka, keydinta alaabta iyo waqtiga wax lagu shaqeynayo, sida wareejinta giraanta, xirmada jaakada, iwm.
Waqtigan xaadirka ah, biibiile bir ah ayaa si ballaadhan loogu isticmaalay wax soo saarka. Tuubooyinka birta ah ama noocyo kala duwan oo hubka caadiga ah ah oo laga maarmi karo, foosto qori, foosto, iwm
Tuubooyinka birta ah waxaa loo kala qaybin karaa tuubooyin wareegsan iyo tuubooyin qaab gaar ah leh iyadoo loo eegayo qaabka aagga isweydaarsiga Maaddaama wareegga uu isku mid yahay, dusha wareegga
Mugga ugu badan, dheecaan dheeri ah ayaa lagu qaadi karaa tuubo wareeg ah. Intaa waxaa dheer, qaybta giraanku waxay ku xiran tahay cadaadis shucaac gudaha ama dibedda ah
Awooddu waa isku mid, sidaa darteed inta badan tuubooyinka birta waa tuubooyin wareegsan.
Si kastaba ha noqotee, dhuumaha sidoo kale waxay leeyihiin xoogaa xaddidan. Tusaale ahaan, iyadoo la raacayo foorarsiga diyaaradda, tuubadu way ka adkeysi yar tahay foorarka marka loo eego tubbada laba jibbaaran iyo tuubada leydilaadka
Awooddu way weyntahay, mashiin yar oo mashiinada beeraha ah oo hirgalin, alaabta birta ah ee alwaaxa ayaa badanaa loo isticmaalaa laba jibbaaran, tuubada qaabaysan.
Biibiile qaabaysan oo qaabeysan.Waa inuu laxiriiraa baaxad ballaaran: dhuumaha wareejinta dareeraha, warshadda kululeeyaha, injineernimada, dhirta mashiinka lagu farsameeyo.
17 Dabaqa, Dhismaha Xingmei, gobolka Liaocheng Shandong, Shiinaha.